March 21, 2012 by chowutyee ဘဲသား ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ (၁၀ယောက်စာ)
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 24 Comments	24 Responses
Plz try Ma Nandar!! it is really yummy one!🙂
looks really delicious..wanna eat right now!!😀
Yeah it is!🙂 Thanks..
၀တ်ရည်က အန်တီတင့်ကိုတောင် အိမ်ဖိတ်ကျွေးမယ်ဆိုပြီ အကြွေးတင်နေတာ။ မချောပြန်လာလည်မှ ဖိတ်လိုက်မယ်နော်.. ကျေးဇူးပါ အန်တီတင့်ရေ..🙂
မချောရေ ဒီတစ်ခါ ၇န်ကုန်လာရင် တကယ်ချက်ကျွေးမှာ… ခုတောင် ပါဆယ်နဲ့ပို့ပေးလို့ရရင် ပို့ပေးချင်ပါတယ်.🙂
I will surely sis!🙂
ကူကူရေ လုပ်စားကြည့်နော်။ ကြက်သားနဲ့လုပ်စားလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျေးဇူးနော်🙂
ဟုတ်ကဲ့ မခင်ယမုံ လုပ်စားကြည့်ပါအုန်းနော်။ ၀တ်ရည်လည်း ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ သိပ်ကြိုက်တာ၊ တော်တော် စားကောင်းတယ် မ.. Thanks also😀
ဟုတ်။ corn flour၊ potato starch လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်..🙂
ငပိက အစိမ်းကိုပဲ ထောင်းရမှာပါ..😛